Madaxweynaha Somaliya oo maanta ku wajahan dalka Uganda – XAMAR POST
Madaxweynaha Somaliya oo maanta ku wajahan dalka Uganda
By Mohamed Ahmed On Oct 22, 2017
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa waxaa maanta lagu wadaa in uu u amba baxo dalka Uganda, oo ka mid ah dalalka ay Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ka jooggan Somaliya.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa dalka Uganda uga sii gudbi doono dalalka Itoobiya iyo Jabuuti, oo sidoo kale ay ciidamoi ka jooggan Somaliya.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa siyaabooyin kala duwan Magaalooyinka Kampala, Addis Ababa & Djibouti ugula kulmi doono Madaxda Uganda, Itoobiya & Jabuuti, oo lagu wado in uu kala hadlo dagaalka cusub, ee dowladiisu ay la galeyso Ururka Al Shabaab.
Ujeedka socdaalka ee Madaxweyne Farmaajo, ayaa salka ku haaya, sidii uu madaxda dalalkaasi uga dhaadhicin in dowladda lagu taageero gulufka, ay dhawaan iclaamisay inay ku qaadeyso mintidiinta Shabaabka.
Wixii ka dambeeyay weerarkii 14-kii bishan ka dhacay Magaalada Muqdisho oo lagu dilay 358 ruux, ayaa waxay Madaxda Dowladda Somaliya ku hanjabeen inay jawaab adag ka bixin doonaan.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa waxaa macquul ah kolka uu dalalkani ka soo laabto in uu la kulmo Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, si uu ugala hadlo arrimo ay ugu muhiimsan yihiin amniga iyo la dagaalanka Al Shabaab.
Madaxweynaha oo Sabtidii shalay kulankaasi la lahaa Xildhibaanada Labada Aqal, ayaa u baaqday arrimo farsamo, sida laga soo xigtay xubno ka tirsan Golaha Shacabka.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland oo dhaawacay taliye ku xigeenkiisa
DEG DEG:- Qarax dad badan ku Geeriyoodeen oo Goordhow ka dhacay Duleedka Balcad